Barnaamijyada Android & iPhone ee ugu wanaagsan taleefannada casriga ah, tablet-yada, iPad-yada
Hadaad raadineyso ugu dambeeyey wararka iyo faallooyinka ku saabsan apps ugu fiican ee telefoonkaaga ama tablet-kaaga, ka dib waxaad timid meesha saxda ah. Halkan Foro KD, waxaanu kula socodsiin doonaa wixii ku soo kordha dhammaan barnaamijyadii ugu dambeeyay ee la sii daayay waxaanan ku siin doonaa ra'yigayada daacadda ah kuwa ku habboon wakhtigaaga. Haddi aad tahay isticmaale IOS ama Android, waanu ku daboolnay. Markaa marar badan dib uga hubi dhammaan wararka iyo faallooyinka abka ee ugu dambeeyay!
Qaar ka mid ah apps waxaa loo qorsheeyay in ay nolosha u fududeeyaan, halka kuwa kalena loo sameeyay in lagu maaweeliyo ama lagu wargeliyo. Guud, apps waxay noqon karaan qalab aad u faa'iido leh oo dadka ka caawiya inay maareeyaan noloshooda siyaabo kala duwan.
Waxay nolosheena ka dhigi karaan kuwo ku habboon oo hufan, iyagoo na siinaya macluumaadka iyo qalabka aan u baahanahay marka aan safarka ku jirno. Waxay kaloo naga caawin karaan inaan ku xirnaano asxaabta iyo qoyskayaga, iyagoo na siinaya qaab aan kula xiriirno inta aan socodka ku jirno. Intaa waxaa dheer, Codsiyada mobilada ayaa naga caawin kara caafimaad qab oo taam, adigoo na siinaya macluumaad iyo qalab aan kula socono horumarka jirdhiska iyo yoolalka.
Waa maxay abka ugu fiican ee tirinta bilicda?
Waa maxay wakhtiga xisaabinta ee ugu wanaagsan ee la maqli karo?
Waa maxay abka ugu fiican ee tirinta miyir-qabka?
Waa maxay abka tirinta anime ee ugu fiican?
Waa maxay abka ugu fiican ee xisaabinta miisaan dhimista?
Waa maxay abka ugu wanagsan ee tirinta wejiga?